'Sekuyakhanya phambili,' kusho uZinnbauer wePirates - Impempe
‘Sekuyakhanya phambili,’ kusho uZinnbauer wePirates
Ubona seliyela ngakhona ekubambeni umgqigqo iqembu lakhe umqeqeshi we-Orlando Pirates, uJosef Zinnbauer ngemuva kokusebenza kanzima ukuze libuye namaphuzu amathathu kwiMaritzburg United abayishaye ngo 1-0 eHarry Gwala Stadium ngoMgqibelo.
Bekungewona umdlalo olula kuwo womabili lamaqembu kwazise abesuka emdlalweni la engenzanga kahle khona, iBucs kade ibanjwe yiLamontville Golden Arrows kanti iBlue Hearts yona beyibuya esibhaxwini sika 3-0 seTS Galaxy maphakathi neviki.
Nokho uZinnbauer ubona sekuntwela ezansi kwezakhe akholwa wukuthi ziyabuyela egiyeni ngemuva kwemiphumela engagculisi yakamuva.
“Kuzosibuyisela ukuzethemba, okuyinto esiyifunayo,” kusho uZinnbauer. “Njengamanje sizobuyela ekhaya siyozama ukubuyela esimweni sokudlala futhi bese sibheka umdlalo olandelayo. Kubalulekile ukuwina, emdlalweni odlule siwatholile amathuba okushaya amagoli kodwa mhlawumbe besingazimisele ngokufanele ukuthi besingawasebenzisa.
“Kodwa manje sesiqala ukuba nomdlandla futhi sesiyawulwela imiphumela,” kuqhuba lo mqeqeshi odabuka eGermany.
Uvumile ukuthi kwiMaritzburg abazange badlale ngendlela ehehayo wathi kodwa okuhle ukuthi bakutholile abebekuhlosile kulo mdlalo.
“Siwatholile amathuba amahle okushaya amagoli ikakhulukazi ngesiwombe sokuqala, futhi besingasheshe siwuqede lo mdlalo ukube siwasebenzisile.
“Esiwombeni sesibili sibe bahle cishe imizuzu elishumi futhi nakhona besingawashaya amanye amagoli. Kodwa-ke, uma ungawasebenzisi amathuba akho, imbangi iya ngokuya izobona inethuba lokubuya emdlalweni bese idlalela ukufa nokuphila.
“Bayakhuthala bese bekuhlasela bephindelela kodwa namuhla u(Richard) Ofori uvimbe kahle kakhulu, kanti nodonga lwasemuva luwenze kahle umsebenzi walo,” kuchaza uZinnbauer.
“Asidlalanga ngendlela echazayo kodwa uma ubhekene neqembu elisendaweni yokudliwa izembe kuhlale kunzima ngoba balwela ukusindisa iqembu. Siwatholile amaphuzu amathathu, yilokho okubalulekile – umphumela.”
Previous Previous post: ISharks izobhekana nowayeyiqeqesha kowamanqamu weCurrie Cup
Next Next post: UKhune kumele akusebenzele ukubuyela eqenjini leChiefs: kusho uHunt